Iimpawu ze-7 awuyifuni iServer yeNtengiso | Martech Zone
Iimpawu kunye nezifinyezo
Umakhi wePhulo lokuHlaziya
Ukukhangelwa kwegama lommandla
Ikhaltyhuleyitha yoPhononongo lwe-Intanethi
Uluhlu lweSpam Spam
Isampulu yeSilinganiselo seSilinganiselo sokuBala
Yeyiphi Idilesi Yam ye-IP?
Iimpawu ze-7 awuyifuni iServer yeNtengiso
NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 UAngelina Lugova
Uninzi lwababoneleli ngetekhnoloji yeentengiso baya kuzama ukukuqinisekisa ukuba ufuna iseva yentengiso, ngakumbi ukuba uyinethiwekhi yentengiso yevolumu ephezulu kuba yile nto bazama ukuyithengisa. Sisiqwengana esinamandla sesoftware kwaye inokuhambisa ukusebenza okungqinisisekayo kuthungelwano oluthile lwentengiso kunye nabanye abadlali beetekhnoloji, kodwa iseva yentengiso ayisosisombululo esifanelekileyo kuye wonke umntu kuzo zonke iimeko.
Kwiminyaka yethu eyi-10 + yomsebenzi kolu shishino, sicinge ngamashishini amaninzi afumana iseva yentengiso naxa ngokucacileyo ayengayifuni. Kwaye ngokusisiseko, kuhlala kuhlala kunjalo izizathu ezifanayo. Ke, iqela lam kunye nam silunciphisile uluhlu ukuya kwiimpawu ezisixhenxe zokuba kutheni kufanelekile ukuba uqwalasele enye indlela kwisisombululo somncedisi wentengiso.
Awunalo unxibelelwano lokuthenga okanye ukuthengisa itrafikhi
Iseva yentengiso ikunika itekhnoloji oyifunayo yokwenza amaphulo kunye nokutshatisa abapapashi nabathengisi abaneemeko zokubeka indawo ozibeke ngesandla. Ayikuniki abapapashi kunye nabathengisi ngokwabo. Ukuba awunakho ukufikelela kubonelelo olwaneleyo kunye namaqabane ebango, akukho ngqiqweni ukuba uhlawule isisombululo sesoftware esikunceda ukulawula olo nxibelelwano.
Endaweni yoko, kuya kufuneka ufumane iqonga lokuthenga elizimeleyo elinikezela ngamaqabane asetelwe ukuthengisa ukugcwala okanye usebenze ngenethiwekhi yentengiso ukulungiselela iimfuno zakho zokuthenga imithombo yeendaba. Inethiwekhi yentengiso olisebenzisana nayo inonxibelelwano oluyimfuneko lokuthengisa ivolumu ephezulu, ke kuphela kwabo baya kuthi baxhamle kwiimpawu zeseva yentengiso ezibenza balawule ngokulula ubonelelo kunye neemfuno zabo ngaphakathi endlwini.
Ukhangela isisombululo senkonzo epheleleyo
Ukuba ujonga isisombululo esiza kukuvumela ukuba uyeke ukuchitha ixesha kunye nezixhobo ekukhonzeni intengiso ngesandla, ungangcono xa uqhagamshelana nearhente yentengiso. Ukuba ukhetha ukusebenzisa iseva yentengiso, uya kufumana uncedo kwisoftware kwinqanaba lokukhwela kwaye uyakonwabela ukulawulwa ngakumbi kwaye ube nakho ukwenza ngokwezifiso amava okuhambisa intengiso kunokuba ubunokuba nawo ngesisombululo se-hybrid okanye sangaphandle, kodwa awuyi kuba Uyakwazi ukuhlamba izandla zakho kwintengiso yesandla esebenza ngokupheleleyo.
Into eyakwenzelwa ngumncedisi wentengiso kukwandisa ukubuya kwakho kwinkcitho yentengiso (ROAS) ngokuhlalutya okungafihliyo kunye nokujolisa okwenziwa ngokwezifiso kwiqonga lolawulo lwenkonzo yokuzenzela, kodwa kusafuneka ukuba utyale ixesha namandla okulawula unxibelelwano kunye namaphulo.
Awulungele ukugqiba izindlu
Umncedisi wentengiso emhlophe-ilebhile kuthetha ukuba ufumana ubunini obupheleleyo beqonga, ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso imikhankaso yakho kwaye uyeke ukuhlawula umrhumo ophakathi. Kulungile kwabo bakulungeleyo ukuzisa isisombululo sabo kwintengiso ngaphakathi endlwini, kodwa kwabanye, ukwenza ngokwezifiso kunye nokuchaneka kweendleko kunokuba yinto ephambili.
Ukuba okwangoku usebenzisa ukuzenzela DSP okanye elinye iqonga lentengiso kwaye wonwabile ngesisombululo sakho se-hybrid, usenokungakulungeli ukuzisa intengiso yakho ekhonza endlwini. Ukukhuphela ngaphandle olo xanduva kwiqela lesithathu kunokubonelela ngezibonelelo zexesha elifutshane ngakumbi kwabo bangenzi ngevolumu ephezulu. Nangona kunjalo, uthungelwano olulungiselelwe ukuphatha i-100% yemikhankaso yabo kunye nokunxibelelana kuya kuxhamla ngakumbi kulawulo lweqonga labo elinokwenziwa ngokwezifiso.
Ukhonza ngaphantsi kwe-1 yezigidi ngenyanga
Iimodeli zentengo yeseva yentengiso zihlala zisekwe kwinani leempawu ozisebenzisayo inyanga nenyanga. Abo basebenza ngaphantsi kwe-10 yezigidi zokubonakala banokufumana iiphakheji ezisisiseko, kodwa ukuba ivolumu yakho isezantsi kakhulu, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba indleko kufanelekile, ungasathethi ke ukuba ubunzima beserver yentengiso phambili kuya kuba ngaphezulu iimfuno.
Udinga isixhobo esilula esinezinto ezimbalwa ezibalulekileyo
Ukuba awuzange usebenzise iseva yentengiso, inani elipheleleyo leempawu kunye nokukhetha kunokuba nzima. Iiplatifomu zentengiso zala maxesha zihlala zibonelela ngaphezulu kweempawu ezingama-500 zokujolisa, uhlalutyo, ukusebenza kakuhle, ukulandela umkhondo woguqulo, kunye nolawulo olusebenzayo ngokubanzi. Ngelixa kuvakala ngathi kukudibanisa uninzi, abanye abasebenzisi bazibona ezi mpawu njengempazamo ngenxa yexesha elithathwayo ukubazi kwaye baqale ukuzisebenzisa. Ukuba ivolumu yentengiso yakho ayifuni sisombululo siphezulu, unokufuna ukuqaphela isixhobo esilula.
Nangona kunjalo, ukuba akukho nanye imiqondiso ekolu luhlu isebenza kuwe kwaye ucinga ukuba ulungele isisombululo esingaqhelekanga nesineendleko njengeseva yentengiso, akufuneki uvumele ubunzima busoyikise. Iingcali ezinamava zinokukhawuleza zifunde imisebenzi kwaye zixhamle kwiimpawu zokuphucula umkhankaso.
Ufuna ukuthenga ukugcwala kwenkqubo
Umncedisi wentengiso sisixhobo esifanelekileyo sokuthenga ngokuthe ngqo kwimithombo yeendaba, kodwa ayisosisombululo senkqubo. Ukuba ufuna ukuthenga ngokwenkqubo, iqonga lecala elifunwayo sisisombululo esingcono kwiimfuno zakho. Unokufumana iilebheli emhlophe ye-DSP kwaye uyiqhelanise ngokupheleleyo neemfuno zeshishini lakho. Kunye RTB umniki zinkonzo kumbindi wayo, iqonga lecala elifunwayo likwenza ukuba ukwazi ukuthenga ukubonakala ngokuzenzekelayo nangexesha langempela.
Awufuni ukufumana ngaphezulu
Le yimeko enqabileyo, kodwa kunokwenzeka ukuba amanye amashishini akulungele ukunyusa ingeniso yawo. Ukuphucula isisombululo sakho sesoftware kunokufuna ukukhwela ngaphakathi kunye noqeqesho ongakulungelanga ukulwenza. Ukuba uziva ukhululekile ngemivuzo yakho kunye nenqanaba lokwenziwa komsebenzi kwintengiso yakho yangoku, unokukhetha ukungatyali imali ngeli xesha. Ngaphandle kwenkuthazo yokukhula okanye ukusebenza ngokukuko, akukho sizathu sokuthenga iseva yentengiso.
Ngaba enye yezi zinto iyasebenza kuwe?
Ukuba olunye okanye nangaphezulu kwezi mpawu zibetha kuwe, aliloxesha elifanelekileyo lokuba utyale imali kwiserver yentengiso. Nangona kunjalo, ukuba akukho nanye yale miqondiso iyasebenza kuwe, isenokuba lixesha lokuba ujonge kancinci kwizibonelelo zeeseva zentengiso. Umncedisi wentengiso yi-alpha kunye ne-omega yentengiso, kwaye inokubetha nayiphi na enye intengiso enikezela ngeqonga ngokwendlela yokwenza ngokwezifiso, ukonga iindleko, kunye nolawulo olulungiselelwe iimfuno ngqo zeshishini lakho.
Fumana isilingo sasimahla se-Epom Ad Server
ezinxulumene Martech Zone amanqaku
tags: Umncedisi wentengisointengisoumncedisi wentengisoDSPepomIimpawuukubiza ixesha lokwenyanirtbkhonza iintengiso
Angelina Lugova Wednesday, September 22, 2021 Wednesday, September 22, 2021
ULina uyiNtloko yeNtengiso kwi-EPOM. Unamava anzulu ekukhokeleni unxibelelwano kumaqonga aliqela, ukusuka kwimidiya yesiko ukuya kubaphembeleli. Kwi-EPOM, idala ulwazi lwabathengi kwaye iqhuba ukuthanda abathengi kumakhonkco onke amajelo entengiso yedijithali yonke imihla.
I-Moqups: Isicwangciso, uyilo, iPrototype, kunye nokuSebenzisana neeWireframes kunye neeMockups ezineenkcukacha
Iindlela zokuThengisa iziQulatho zeB2B
Ingaba ucinga ntoni?	Rhoxisa impendulo
Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda indlela idatha yakho yokubhaliweyo isetyenziswe ngayo.
Iipodcasts zethu zamva nje
UKate Bradley Chernis: Ubukrelekrele obuGunyazisiweyo buQhuba njani ubuGcisa bobuNtengiso boMxholo
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noKate Bradley-Chernis, i-CEO kungekudala (https://www.lately.ai). U-Kate usebenze kunye neyona nto ibalulekileyo kwihlabathi ukuphuhlisa izicwangciso zomxholo eziqhuba ukubandakanyeka kunye neziphumo. Sixoxa ngendlela ubukrelekrele bokusebenza obusinceda ngayo ukuqhuba iziphumo zokuthengisa umxholo. Mva nje yimithombo yeendaba ye-AI yemithombo yeendaba…
Uncedo oluqokelelweyo: Ungawakha njani amaXesha akho ngeeMbono zakho, kwiShishini kunye nakuBomi ngokuchasene nazo zonke iingxaki
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noMark Schaefer. UMark ungumhlobo omkhulu, umcebisi, umbhali oqaqambileyo, isithethi, ipodcaster, kunye nomcebisi kwishishini lokuthengisa. Sixoxa ngencwadi yakhe entsha, eyiCumulative Advantage, egqitha kwintengiso kwaye ithetha ngokuthe ngqo kwizinto ezichaphazela impumelelo kwishishini nakubomi. Siphila kwihlabathi…
ILindsay Tjepkema: Ividiyo kunye nePodcasting ziguqukele njani kwiiQhinga lokuThengisa le-B2B
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha nomsunguli kunye ne-CEO yeCasted, uLindsay Tjepkema. ULindsay unamashumi amabini eminyaka ekuthengiseni, ligqala lepodcaster, kwaye wayenombono wokwakha iqonga lokukhulisa kunye nokulinganisa iinzame zakhe zokuthengisa ze-B2B ... ke yena waseka uCasted! Kulesi siqendu, uLindsay unceda abaphulaphuli baqonde: * Kutheni ividiyo…
UMarcus Sheridan: Iindlela eziDijithali zokuba amaShishini awaKhathaleli ... Kodwa kufanelekile
Phantse iminyaka elishumi, uMarcus Sheridan ebefundisa imigaqo-nkqubo yakhe kubaphulaphuli kwihlabathi liphela. Kodwa ngaphambi kokuba ibe yincwadi, ibali lamachibi oMlambo (owawusisiseko) lalibhalwe kwiincwadi ezininzi, upapasho kunye neenkomfa zendlela yayo eyahlukileyo yokungenisa kunye nokuThengisa. Kule Martech Zone Udliwanondlebe,…
UPouyan Salehi: Itekhnoloji eqhuba ukuSebenza kweNtengiso
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noPouyan Salehi, usomashishini osisigxina kwaye uzinikezele kule minyaka ilishumi idlulileyo ekuphuculeni nasekwenzeni inkqubo yokuthengisa ye-B2B yokuthengisa amashishini kunye namaqela eerhafu. Sixoxa ngobuchwephesha obuchaphazele ukuthengisa kwe-B2B kwaye sivavanye ukuqonda, izakhono kunye netekhnoloji eya kuqhuba ukuthengisa…
UMichelle Elster: Izibonelelo kunye nobunzima boPhando lweMarike
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noMichelle Elster, uMongameli weRabin Research Company. UMichelle yingcali kuzo zombini iindlela zokubala kunye nezobulunga ezinamava abanzi kwilizwe liphela kwintengiso, kuphuhliso lwemveliso entsha, kunye nonxibelelwano ngobuchule. Kule ncoko, sixoxa: * Kutheni iinkampani zityala imali kuphando lwemarike? * Unga kanjani…
UGuy Bauer kunye noHope Morley we-Umault: Ukusweleka kwiVidiyo yeQumrhu
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noGuy Bauer, umsunguli kunye nomphathi woyilo, kunye noHope Morley, igosa eliyintloko lokusebenza le-Umault, iarhente yokuthengisa yevidiyo yoyilo. Sixoxa ngempumelelo ka-Umault ekuphuhliseni iividiyo zamashishini akhula kakuhle kwimizi-mveliso egcwele iividiyo ezihambelana noko. I-Umault inepotifoliyo enomdla yokuphumelela kunye nabaxumi…
UJason Falls, uMbhali weWinfluence: Ukuphinda uthengise ukuThengisa ukuPhembelela ukuKhanya uphawu lwakho
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noJason Falls, umbhali weWinfluence: Ukuphinda uthengise ukuThengiswa kweFluencer ukuze unganaki uphawu lwakho (https://amzn.to/3sgnYcq). UJason uthetha ngemvelaphi yentengiso yempembelelo ngokusebenzisa iindlela ezilungileyo zanamhlanje ezibonelela ngeziphumo eziphakamileyo zeemveliso ezihambisa iindlela zempembelelo zokuthengisa. Ngaphandle kokubamba kunye…
UJohn Voung: Kutheni eyona SEO isebenzayo yaseKhaya iqala ngokuba nguMntu
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noJohn Vuong woPhando lwe-SEO yaseKhaya, uphando olupheleleyo lwenkonzo, umxholo, kunye nearhente yemithombo yeendaba kwezentlalo yamashishini endawo. UJohn usebenza nabaxhamli kumazwe aphesheya kwaye impumelelo yakhe yahlukile kubacebisi be-SEO baseKhaya: UJohn unesidanga kwezemali kwaye wayengumanduleli kwidijithali kwangethuba, esebenza ngokwesiko…
UJake Sorofman: Ukuyila kwakhona i-CRM ukuze uguqule ngokwamanani i-B2B Lifecycle yoMthengi
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noJake Sorofman, uMongameli weMetaCX, uvulandlela kwindlela esekwe kwiziphumo yokulawula ubomi kumthengi. I-MetaCX inceda i-SaaS kunye neenkampani zemveliso yedijithali ukuguqula indlela abathengisa ngayo, ukuhambisa, ukuvuselela nokwandisa ngamava edijithali adityanisiweyo afaka umthengi kuwo onke amabakala. Abathengi kwi-SaaS…
Bhalisa kwi Martech Zone Newsletter
Bhalisa kwi Martech Zone Udliwanondlebe nePodcast
Martech Zone Udliwanondlebe kwiAmazon
Martech Zone Udliwanondlebe kwiApple
Martech Zone Udliwanondlebe kwiPodcasts zikaGoogle
Martech Zone Udliwanondlebe kuGoogle Play
Martech Zone Udliwanondlebe kwiCastbox
Martech Zone Udliwanondlebe noCastro
Martech Zone Udliwanondlebe kwiOvercast
Martech Zone Udliwanondlebe kwiPocket Cast
Martech Zone Udliwanondlebe kwiRadioopublic
Martech Zone Udliwanondlebe kwiSpotify
Martech Zone Udliwanondlebe kwiStitcher
Martech Zone Udliwanondlebe kwiTuneIn
Martech Zone Udliwanondlebe neRSS
Jonga iiMinikelo zethu eziSelfowuni
Silapha Apple News!
Okudume kakhulu Martech Zone amanqaku
© Copyright 2022 DK New Media, Onke Amalungelo Agciniwe
Buyela Phezulu | Imiqathango yeNkonzo | umthetho wabucala | ukuxela
Uqoqosho kunye noRhwebo
UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi
malunga Martech Zone
Bhengeze nge Martech Zone
Ukuthengisa kunye neeVidiyo zokuThengisa
Silusebenzisa njani uLwazi lwakho
Sisebenzisa iicookies kwiwebhusayithi yethu ukuze sikunike amava afanelekileyo ngokukhumbula ukhetho lwakho kunye nokuphindaphinda ukutyelelo. Ngokucofa "Yamkela", uyavuma ukusetyenziswa kwazo zonke ii-cookies.
Sukuthengisa iinkcukacha zam.
Izicwangciso ze CookieYamkela
Le webhusayithi isebenzisa ikuki ukuphucula amava akho ngelixa ujikeleza iwebhusayithi. Ngaphandle kwezi, ii-cookies ezihlelwe ngokokufuneka kwazo zigcinwa kwisikhangeli sakho njengoko zibalulekile ekusebenzeni kwezinto ezisisiseko kwiwebhusayithi. Sikwasebenzisa ikuki zomntu wesithathu ezisinceda ukuba sihlalutye kwaye siqonde ukuba uyisebenzisa njani le webhusayithi. Ezi cookies ziya kugcinwa kwisikhangeli sakho kuphela ngemvume yakho. Unenketho yokukhetha ukuphuma kwezi kuki. Kodwa ukuphuma kwezinye zezi kuki kunokuchaphazela amava akho okukhangela.
Uhlale Unikwe amandla
I-cookie iyimfuneko ibaluleke kakhulu kwiwebhusayithi ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Eli candelo liquka kuphela i-cookies eqinisekisa ukusetyenziswa kwezinto ezisisiseko kunye nezinto ezikhuselekileyo zewebhusayithi. Ezi cookies azilondolozi nayiphi na ulwazi lomntu.
Naliphi na i-cookie engabalulekanga ngokukodwa ukuba i-website isebenze kwaye isetyenziswe ngokukodwa ukuqokelela idatha yomntu ngamnye ngokusebenzisa i-analytics, iintengiso, ezinye izinto ezifakwe ngaphakathi zibizwa ngokuba yi-cookies ezingezizo. Kunyanzelekile ukufumana imvume yomsebenzisi ngaphambi kokusebenzisa le cookies kwiwebhusayithi yakho.
Gcina kwaye wamkele